Izolo emva kokuhlwa kwaseUnited States kwafika iindaba zokuzalwa kuka-Anna Kournikova no-Enrique Iglesias abantwana babini. Iindaba zazixakeke ngokupheleleyo, kwakukho amahemuhemu athi u-Iglesias noKournikova baqhekeka.
Nangona kunjalo, kuyamangalisa kwaye inyaniso yokuba umdlali wazala 36, ​​nangona bekunye kunye nomculi iminyaka eyi-16. Kubonakala ngathi, xa sele esondele kwixesha elibuhlungu, loo mbini yajika kwikliniki apho uAna wayeneVF.
Iziqabane zivaliwe indlela yokuphila kwaye phantse zingabonakali ekukhanyeni.
Abasebenzisi besetrokrekthi ukuba amawele u-Enrique Iglesias no-Anna Kournikova bazalwa ngumama onamaqabane
Ngokukhawuleza ukuba iindaba zakutshanje zisasazwa kumaphephandaba, uluntu lwaqala ukuxubusha umcimbi ovuyoleyo ngamandla. Abazali abonwabileyo abanikeli ngcaciso malunga neNewlas noLucy. Kodwa umhlobo wale mbhangqwana ocele ukuba igama lakhe lingabizwa, wathi ufunde ngoKournikova ukukhulelwa malunga neenyanga ezintlanu ezedlule:
Ndabona i-tummy yakhe emnandi, ejikelezileyo. Malunga neenyanga ezintlanu ezedlule umhlobo wam undixelele ukuba bekulindele, kodwa baqhubeka beendaba eziphantsi kobucokisekileyo
Ukufihla okungaqhelekanga kubonisa ukuba u-Anna Kournikova wayengenako umntwana, ngoko ke loo mbhangqwana wayesebenzisa unina. Okufanayo kunokuchaza isizathu sokuba umdlali wangaphambili we-tennis akazange abonise umfanekiso oguqukileyo. Ngo-Agasti, uAna wabeka ukuqeqeshwa kwevidiyo ye-Instagram, apho kungekho ncamango yeso simo esithakazelisayo. Kwaye ukuba uKournikova wayekhulelwe ngamawele, kwinyanga yesihlanu kuya kubonakala:
Abacaphuli baphankanya ukuba uKournikova no-Iglesias basebenzisa iinkonzo zomama onguzala:
elena.tsvetok Kwimfihlo ecacileyo))) kunoma yimuphi umama onqambileyo wazala apha kwaye wafihla!
elenadenisenko2017 Ewe, yinyani apho imifanekiso ifikelwe njengento engaqhelekanga
Ama-milaniamendes Awuzange abelethe yena ...
moustafina Ndikhumbula indlela uAnna avuma ngayo ukuba akakwazi ukukhulelwa ... wayefuna ukuthatha umntwana kwintandane.
milada_07 Yenze kakuhle. Kwaye ndingazifihla ngenxa yokuba ndazala umntwana.
Ngenxa ye "Oscar" uLeonardo DiCaprio waqala ukuthetha ngelizwi likaGarik Kharlamov
Yimangalisa! UVera Brezhneva wambonisa isisu esikhulu, isithombe
Ngenxa ye-Alexei Panin esuka kwiintanethi zaseStas Kostyushkin azizibhalanga
U-Dzhigurda no-Anisin baphinde bavalelwa ngamanga
U-Ksenia Sobchak uqinisekisile iingxoxo malunga nokukhulelwa kwakhe, isithombe
7 abaphumelele kwi-"Factory of Stars", abaye bakwazi ukuba ziinkwenkwezi zezorhwebo, iifoto ezinqabileyo
Umkhwa weGothic ubuyela kwimoya
Ukutyunjwa, ukunyamekela izipikili ezinobumba
Imizekelo yokugcoba kwintsika e-Halloween 2016
Umnqweno woNyaka omtsha ka-2013
Indlela yokufumana iholide elungileyo nelingabizi kwi-Ukraine
Ngaba kufuneka ndixolele umyeni wam
Umculi uYury Antonov, i-biography
Valery Meladze amaphupha okudakwa emtshatweni
Ingulube ye-ngulube ne-honey-toard
Ama-radicals namahhala asebekhulile
Ingulube ihamba nge-cherry sauce
I-nut nut nut
Indlela yokugcina nokuqonda indoda
I-Horoscope ngo-Disemba 2017-ibhinqa-i-Pisces - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl